IBhodi yoMlawuli waseTshayina eShicileleyo iNdibano yeSekethe yokwenziwa kunye neFactory |KAISHENG PCB
I-PCBFuture inoxanduva lwendibano yonke ye-PCB evela kwimveliso ye-PCB, ukuthengwa kwezixhobo, indibano ye-SMT, ngendibano yomngxuma, uvavanyo kunye nokuhanjiswa.Njengomvelisi ohamba phambili wendibano ye-elektroniki ebonelela ngeenkonzo zendibano yePCB umthamo, siqinisekisa ukuba iimveliso zakho zisimahla kwaye ziphantsi kweendleko.
Iileya:8 Umaleko wePCB
Izinto ezisisiseko:Phezulu Tg FR-4
Metal Coating: HASL lead free Indlela yeMveliso: SMT + Iileya: 8 Layer PCB
Izinto ezisisiseko: I-Tg ephakamileyo FR-4 Isiqinisekiso: SGS, ISO, RoHS MOQ: Akukho MOQ
Iintlobo zeSolder: I-Lead-Free Iinkonzo zokuZimisa okuNye: UVeliso lwePCB+ Amacandelo+ iNdibano Uvavanyo: 100% AOI / X-ray / Uvavanyo olubonakalayo
Inkxaso yeTehnology: I-DFM yasimahla (uYilo lokuVelisa) Jonga Iindidi zeeNdibano: SMT, THD, DIP Umgangatho: IPC-a-610d
Amagama angundoqo: Abemi bePCB, abavelisi beNdibano yePCB, iNdibano yePCB etshiphu, iNkonzo yeNdibano yePCB, Inkqubo yeNdibano yePCB
1. Sinokuvelisa ukujika ngokukhawuleza ukuhlangabezana nokuhanjiswa kweeyure ezingama-24 kwii-PCB ezinamacala amabini, iiyure ezingama-48 kwi-4 ukuya kwi-8 layers kunye ne-120 yeyure kwi-10 layer okanye ii-PCB eziphezulu.Siza konga ixesha lakho okanye iindleko zakho ukuze unciphise kwaye ufumane uxanduva lwababoneleli abaninzi ababandakanyiweyo.
2. Sinolawulo lweendleko kwinkqubo nganye ukuze sinikeze abathengi ngexabiso eliphantsi lePCB kunye nendibano yePCB.
3. IiPCB zethu ezikumgangatho ophezulu zivela kwizinto ekrwada esizikhethayo, izixhobo eziphambili esizisebenzisayo, ulawulo lwenkqubo esilulandelayo, ulawulo olufanelekileyo luthobela kunye nazo zonke iingcali zethu esinazo.
4. Sinikezela ngenkonzo ye-PCB yokuguqula ngokukhawuleza kunye nokuphendula ngokukhawuleza kwi-PCB yombuzo.Kwiprototype yePCB enamacala amabini, sixhasa inkonzo ekhawulezayo yeeyure ezingama-24.
Ukutshintsha ngokukhawuleza inkonzo yePCB
Ukuphendula ngokukhawuleza kwi-PCB yombuzo
Iiyure ezingama-24 zenkonzo ekhawulezayo
Indibano yePCB enexabiso eliphantsi
Iingenelo zoMqulu wethu weNdibano yePCB:
• Zonke ii-PCB ezingenanto ziyi-100% yovavanyo (E-test, test Solderability, FQC njalo njalo).
• Iintambo ezininzi zokuhlangana ukuhlangabezana nezona mfuno zifunwa kakhulu zabathengi.
• Ukunikezela ngenkonzo yendibano ye-PCB yomzekelo wokuvavanya phambi kokuveliswa kobuninzi.
• Qala imveliso yobuninzi okanye unikeze okwesibini imveliso yendibano ye-PCB emva kokuba umthengi aphumelele lonke uvavanyo.
• Ukuhlolwa kwe-AOI kunye nokuhlolwa okubonakalayo ngexesha lokudityaniswa kwePCB.
• Ukusebenzisa ukuhlolwa kwe-X-reyi ye-BGA kunye nezinye iipakethe ezintsonkothileyo.
• Ukuba kufunyenwe naziphi na iingxaki zendibano, iinjineli zethu ezinamava zingazisombulula phambi kokuthumela ngenqanawa.
• Sineqela elinamava kakhulu lokusombulula zonke iingxaki zendibano kwaye sithumele iiPCBs ezikumgangatho ophezulu kuwe ngexesha.
Asiluchazi ubungakanani beeodolo zePCB.Ungajika ngokukhawuleza iPrototype PCB.Akukhathaliseki nokuba ubungakanani sisiqwenga esinye kuphela.Sibonelela ngeebhetshi ezincinci naphakathi kunye nemiyalelo emikhulu.
Akunjalo nje ukuba akukho mfuneko kunye nokunciphisa ubuninzi, kodwa kungakhathaliseki ukuba ingakanani iodolo, sibonelela ngeendleko eziphantsi kunye neenkonzo zokuvelisa i-PCB ezikhawulezayo kunye neenkonzo zendibano njengangaphambili.
Ngenxa yomthamo wemveliso, iindleko zabasebenzi, iindleko zokuthengwa kwezinto ezisetyenzisiweyo kunye nezinye izinto, asikukhuthazi ukuba udibanise ngokukhawuleza iiPCB kwenye indawo.I-PCBFuture ineengenelo ezizodwa zexabiso eliphantsi, itekhnoloji yemveliso egqwesileyo, kunye nokuhanjiswa kwangexesha.
Usukelo oluqhubekayo lwePCBFuture luncedo kubathengi bethu ekuveliseni iimveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nezona nzuzo zikhuphisanayo kumashishini abo.Nceda uqhagamshelanesales@pcbfuture.comkwiprojekthi yakho elandelayo.
Ngaphambili: Indibano yebhodi yokulawula
Okulandelayo: Ems Pcb iNdibano